indrindra fa ny faran’ny herinandro teo. Amin’ny ankapobeny dia ireo orinasa lehibe eto amintsika no lohalaharana amin’izany fanolorona fanampiana izay. Ny 03 aprily lasa teo dia nanolotra fanomezana ny orinasa TOTAL Madagascar. “Carte carburant” ho`an ny fiara 300 sy fiaramanidina miisa 07 no natolony tamin` ireo tompon’andraikitra. Nitondra ny anjara birikiny ihany koa ny masoivohon` i Suisse. Ho fanohanana an` Antananarivo Renivohitra manoloana ny fihanaky ny COVID-19 dia nanolotra savony miisa 22 500 izy ireo entina handraisana an-tanana ireo tsy manan-kialofana. Ny orinasa sicam dia nampindrana fiara 20 , nanolotra finday miisa 111 ny Telma, nanolotra lelavola 80 tapitrisa ariary ny Mateza Tole Ampitatafika…santionany ireo fa maro ireo nanolotra vola sy fitaovana; tsy orinasa na masoivoho vahiny ihany fa misy sekoly, ivotoeram-panofanana, olon-tsotra, manampahefana sy tompon’andraikim-panjakana ambony, Fiangonana…Ny OMS moa tao anatin’ny fampilazana nataony, ny zoma teo, dia mankasitraka ireo rehetra malala-tanana manoloana izao ady lehibe hatrehan’ny firenena izao, ary mamporisika ireo tsy mbola nanome fanampiana satria ny tombotsoan’ny daholobe no hiadiana.